ဘယ်လို XLS မှ PDF ကိုပြောင်းမှ - ဖိုင် FORMAT - 2019
ဘယ်လို XLS မှ PDF ကိုပြောင်းမှ
ဒါကြောင့်သင်ပထမဦးဆုံး Hamachi စတင်ပြီးသားကစားသမားနှင့်အတူမည်သည့် network ကိုချိတ်ဆက်ရန်စီးကျလာတယ်ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာတခုတခုအပေါ်မှာအမှားလည်းမရှိတစ် LogMeIn ဝန်ဆောင်မှုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
1. မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဆိုပါအစီအစဉ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးက်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ feature ကပရိုဂရမ်သူ့ဟာသူအတွက်ရရှိနိုင်ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မှားယွင်းမှုတစ်ခုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါသင်္ကေတပြင့်စာမျက်နှာတွင် 2. ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့တရားဝင်အီးမေးလ်နှင့်လိုချင်သော password ကို2ကြိမ်ရိုက်ထည့်ပါ။
3. ကျနော်တို့သာ (က link ကိုရပါလိမ့်မယ်) e-mail, ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ entry ကိုအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Hamachi အတွက် 4. မှတ်ပုံတင်ခြင်းယခုအစီအစဉ်သည်သင်တို့အဘို့အမေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး, သင်သွားနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်, အောင်မြင်သောပဲ!
အဆိုပါ authentication ကိုပျက်ကွက်လျှင်, ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းလည်းမရှိ:
program ကိုကလစ်နှိပ်ပါခုနှစ်တွင် 1. "System ကို> တစ်ဦး LogMeIn အကောင့်ချိတ်တွဲနေ ... " ။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင် e-mail, အကောင့်ရိုက်ထည့်ပါ, ပေါ်လာပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင် 2. ။ သင့်အနေဖြင့် "ပူးတွဲမှုတောင်းဆိုချက်ကို" စေလွှတ်တော်မူသောသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
3. အခုတော့အားလုံး action ကိုတည်ဆဲကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ရက်များနှင့်အတူအလုပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆိုက် secure.logmein.com, ပြောင်းရွှေ့နေသည်။
"ကွန်ယက်> ကြှနျုပျ၏ကွန်ယက်" လက်ဝဲကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျနော်တို့အသစ် 1 ခုရဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချက်ရှိကွောငျးကိုကြည့်ပါ။
အခုတော့ကြောင်းလိုင်းပေါ်တွင် click လုပ်, ငါတို့ခလုတ်ကို "လက်ခံပါသည်" နှင့် "Save" ကိုကလစ်နှိပ်ပါအနီးရှိအမှတ်ထားတော်မူ၏။
4. အခုအတည်ပြုခြင်းပြီးနောက်, ပရိုဂရမ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်မဆိုကွန်ယက်ကို join ပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး functions များ, parameters တွေကို, ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖန်တီးဖို့မှပွင့်လင်း access ကို။